VOC Kurapa Sisitimu
Yemazuva Ano Farm
Kubata Mhepo Units
Yakachena Kamuri Yemhepo Kubata Chikamu
DX Yemhepo Kubata Chikamu
Nyowani Yemhepo Kubata Chikamu
Maindasitiri Emhepo Anobata Units
Rooftop Mhepo Inodzora
ICT Mhepo Inodzora
Yakachena Kamuri HVAC System
Vanopisa Mhepo Vanopisa
Kupisa Kwekudzorera Ventilator
Pombi Yekupisa Yekupisa Yekudzorera Ventilator
Zvirongwa Nyaya Yekudzidza
Mhando dzakasanganiswa dzemakemikari (VOCs) makemikari emakemikari ane hutsi hwakanyanya hwekupisa mumba. Hwavha hwemhepo yavo hwakakura hunobva panzvimbo inodzika yakadzika, izvo zvakakonzera huwandu hwakawanda hwe mamorekuru kuti ashanduke kana kunyorova kubva pamvura kana yakasimba kubva mukomboni uye opinda mumhepo yakatenderedza. Mamwe maVOC ane njodzi kuhutano hwevanhu kana kukuvadza nharaunda.
MaVocs ekurapa anoshanda musimboti:
Inobatanidza VOCS condensate uye yekudzoreredza unit inoshandisa iyo firiji tekinoroji, kutonhodza maVOCs zvishoma nezvishoma kubva patembiricha tembiricha kusvika -20 ℃ ~ -75 ℃ .VOCs anodzoreredzwa mushure mekudhakwa uye kuparadzaniswa nemhepo. Maitiro ese anoshandiswazve, kusanganisira kudzikamisa, kupatsanura uye kupora zvinoramba. Chekupedzisira, iyo gasi isina kugadzikana inokodzera kuburitswa.
Oiri / Makemikari kuchengetedza
Oiri / Makemikari chiteshi
Maindasitiri VOC kurapwa
VOCs condensate uye yekudzoreredza unit inotora yemuchina firiji uye multistage inoenderera kutonhora kudzora maVOC tembiricha. Kupisa kupisa pakati pefriji uye isina gasi yakanyatsogadzirirwa kupisa exchanger. Refrigerant inotora kupisa kubva pagasi risingachinjiki uye inoita kuti tembiricha yayo isvike dova kunongedzera kwakasiyana kumanikidza. Iyo gasi yakasarudzika gasi inokandirwa mumvura uye yakaparadzaniswa nemhepo. Maitiro acho ari kuenderera, uye condensate inobhadhariswa mutangi yakananga pasina kusvibiswa kwechipiri. Mushure mekunge yakaderera-tembiricha mweya wakachena wasvika wakakomberedza tembiricha nekupisa kuchinjanisa, inozopedzisira yaburitswa kubva kune inouraya.
Chidimbu chinoshanda mune yakasarudzika organic organic yekuzadza gasi kurapwa, yakabatana ne petrochemicals, zvigadzirwa zvekugadzira, zvigadzirwa zvepurasitiki, zvemidziyo yekupfeka, kudhinda kwepakeji, nezvimwe. Ichi chikamu hachigone chete kubata gasi gasi zvakachengeteka uye nekuwedzera mashandisirwo emashandisirwo eVOCs zviwanikwa zvakanyanya asi zvakare kuunza kufunga nezvebatsiro mune zvehupfumi. Inobatanidza zvinoshamisa zvemagariro mabhenefiti uye zvakanakira zvakanakira, izvo zvinobatsira mukudzivirira kwezvakatipoteredza.
Kubva 2007, Airwoods yakatsaurirwa kupa yakazara hvac, yakachena imba uye VOC kurapwa mhinduro kumaindasitiri akasiyana. Isu tinovavarira kuendesa yakanaka yekuvaka yemhando yepamusoro kune pasirese nemagetsi anoshanda zvigadzirwa, mhinduro dzakagadziriswa, mitengo inodhura uye nemabasa makuru.
Room 2101, Headquarters Center Building No. 25, Tian An Hi-Tech Ecological Park, No. 555 Panyu Ave, Panyu District, Guangzhou, China